एलेभ बनाम इबुप्रोफेन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन चेकआउट औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट घरपालुवा जनावर कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एलेभ बनाम इबुप्रोफेन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
एलेभ र इबुप्रोफेन दुई ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी) औषधि हुन् जसले हल्का देखि मध्यम दुखाइको उपचार गर्न सक्छन्। दुबै औषधिहरू गठिया, टाउको दुखाइ, वा गाउटको दुखाई, अन्य सर्तहरूको बीचमा उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। इबुप्रोफेन र एलेभ, जो नेप्रोक्सेन पनि हुन्, औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ जसलाई नन्स्ट्रोइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) भनिन्छ। तिनीहरू प्रोस्टाग्लैन्डिनको विमोचन रोक्न कार्य गर्दछन्, जुन शरीरमा सूजन र पीडा निम्त्याउने पदार्थहरू हुन्।
एलेभ (एलेभ के हो?), जसको जेनेरिक नाम, नेप्रोक्सेन द्वारा पनि चिनिन्छ, दु: ख, ज्वरो र जलनको लागि काउन्टरमा किन्न सकिन्छ। एलेभ २२० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट वा २२० मिलीग्राम तरल पदार्थले भरिएको मौखिक क्याप्सूलको रूपमा उपलब्ध छ। यो १ देखि २ ट्याब्लेट वा क्याप्सुलको रूपमा हरेक to देखि १२ घण्टा हल्का दुखाइको लागि आवश्यकको रूपमा गर्न सकिन्छ। यद्यपि, खुराक तपाइँको अवस्था र डाक्टरको सिफारिसमा निर्भर छ।
किनकि एलेभ एक NSAID हो, यो पेप्टिक अल्सर रोगको इतिहास भएकाहरूको लागि सिफारिश गरिदैन। यो केहि बिरामीहरूमा पेट अल्सरको बढेको जोखिमको कारणले हो। मृगौला वा कलेजो बिरामी भएकाहरूमा पनि अलेभको प्रयोगको अनुगमन गरिनु पर्छ।
अलेभमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
अलेभ मूल्य अलर्ट को लागी साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
miconazole र tioconazole बीच के फरक छ?
इबुप्रोफेन (आईबुप्रोफेन भनेको के हो?) मोट्रिन, मिडोल र एडभिल जस्ता ब्रान्ड नामबाट पनि चिनिन्छ। Ibuprofen प्रिस्क्रिप्शन र अधिक-काउन्टर शक्तिहरुमा उपलब्ध छ। काउन्टरमा उपलब्ध विशिष्ट शक्ति २०० मिलीग्राम हो। यो मौखिक ट्याब्लेट वा मौखिक क्याप्सूलको रूपमा लिन सकिन्छ। अन्य फारमहरू बच्चाहरूको लागि उपलब्ध छन्, जस्तै चवाबल ट्याब्लेट र मौखिक तरल पदार्थ।
इबुप्रोफेन दुखाइ, ज्वरो, वा सूजन को लागी हरेक or देखि hours घण्टा लिन सकिन्छ। एक NSAID को रूप मा, Ibuprofen पेट अल्सर को एक इतिहास संग ती लिनु हुँदैन। यसले किडनी र कलेजो समस्या भएका व्यक्तिहरूमा पनि अनुगमित गरिनुपर्दछ दुष्प्रभावको सम्भावित वृद्धि जोखिमको कारण।
एलेभ बनाम आइबुप्रोफेन साइड साइड साइड साइड तुलना
अलेभ र इबुप्रोफेन दुई समान औषधि हो। यद्यपि तिनीहरू औषधिहरूको समान समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ, त्यहाँ केहि समानताहरू र भिन्नताहरू ध्यान दिनुहोस्। यी सुविधाहरू तल तालिकामा फेला पार्न सकिन्छ।
असामान्य रेनल समारोह
इबुप्रोफेन सामान्य नाम हो
100 ११.१6 प्रति १०० ट्याबलेटहरू
१ ((प्रति २० ट्याब्लेट)
अलेभ गर्भावस्था कोटि सी मा छ। केही डाटा सम्भव भ्रूण क्षति देखाउँदछ। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा एलेभ लिन सम्बन्धी चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
इबुप्रोफेन गर्भावस्था कोटि D मा हुन्छ। त्यसैले, यो गर्भावस्थाको समयमा लिनु हुँदैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउँदा कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ भन्ने बारे डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
समान प्रकारको पीडाको उपचार गर्न एलेभ र इबुप्रोफेन दुबै प्रभावकारी विकल्पहरू हुन्। NSAIDs को रूपमा, तिनीहरूले सूजन, पीडा, र ज्वरोलाई कम गर्न काम गर्दछन्। दुबै औषधीहरू काउन्टरमा पनि उच्च पर्चा शक्ति संस्करणहरू उपलब्ध छन्।
एलेभ मुख्यतया डोजको आवृत्तिमा आईबुप्रोफेन भन्दा फरक छ। अलेभ को प्रभाव आईबुप्रोफेन भन्दा लामो समय सम्म रहन सक्छ। नतिजाको रूपमा, एलेभ हरेक to देखि १२ घण्टा गर्न सकिन्छ जबकि आईबुप्रोफेन प्राय:4देखि hours घण्टामा डोज गरिन्छ।
effexor र effexor xr बीच के फरक छ?
दुबै औषधिको समान साइड इफेक्ट र ड्रग अन्तरक्रिया छ। अल्सरको बढेको जोखिमको कारण ती रगत पातलो पार्ने औषधीहरूको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन। अलेभ र इबुप्रोफेन वृद्ध व्यक्तिको सावधानीका साथ किडनी वा कलेजो समस्याको साथ पनि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
यो औषधि बनाम औषधि तुलना एक डाक्टर संग छलफल गर्नुपर्छ। यहाँ प्रस्तुत संक्षिप्त सिंहावलोकन डाक्टरको सल्लाह प्रतिस्थापन गर्दैन। एक NSAID अन्य कारकहरु बीच तपाइँको समग्र स्थिति को आधारमा प्रयोग गर्न अधिक उचित हुन सक्छ।
Surpris आश्चर्यजनक तरिकाहरू तनावले तपाईको शरीरलाई असर गर्न सक्छ
कहिले सम्म tamiflu मा संक्रामक छैन
novolog र humalog एउटै इन्सुलिन छ
तपाइँ के खान वा पिउन सक्नुहुन्छ चाँडै उच्च रक्तचाप तल ल्याउन?
एन्टिबायोटिकको साथ कस्तो प्रोबायोटिक्स लिनुपर्छ?
के प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो monistat हो
काउन्टर खाँसी सिरप हो कि तपाइँ उच्च हुन्छ